गीत गाउन सौखिन टिचिङ अस्पतालका डाक्टर :: Setopati
गीत गाउन सौखिन टिचिङ अस्पतालका डाक्टर
प्रभाकर गौतम काठमाडौं, फागुन ८
डाक्टर रमेशसिंह भण्डारी ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल तथा कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन हुन्। चिकित्सा पेसाबाहेक संगीतमा रूचि राख्ने उनी आफ्ना साथीभाइ र आफन्तमाझ 'गायक डाक्टर'का रूपमा पनि परिचित छन्।
विद्यालय पढ्दैदेखि संगीतमा रूचि भएका उनले एमबिबिएस विद्यार्थी छँदा एउटा गीत रेकर्ड गराएका थिए। 'चिसो चिसो हावा चल्छ' बोलको त्यो गीत आजभन्दा दुई दशकअघि रेकर्ड भएको थियो।
'संगीत सौख मात्र थियो, मेडिकल पढाइ मुख्य प्राथमिकता,' सेतोपाटी गितार सेसनमा डाक्टर भण्डारीले भने, 'अहिले पेसागत रूपमा स्थापित भएपछि त्यो सौख फेरि बढेको छ। एक-दुई वटा गीत रेकर्ड गर्न थालेको छु।'
पछिल्ला दुई वर्षमा उनले 'कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री' को कभर भर्सन, आफ्नै गीत 'बन्छ नमूना नेपाल' र 'नीलो आकाश' बोलका गीत रेकर्ड गराएका छन्।
उनी आइएससी पढ्दा गायक सञ्जय श्रेष्ठ नेतृत्वको 'क्रसरोड' ब्यान्ड चर्चामा थियो। क्रसरोड नेपाली पप संगीत लोकप्रिय बनाउनेमध्ये एउटा प्रमुख ब्यान्ड मानिन्छ। मेलोडी संगीत रूचाउने डाक्टर भण्डारीमा त्यसपछिका पप संगीतको मुख्य प्रभाव भेटिन्छ।
पछिका पप गायकहरू नवीन के भट्टराई, सुगम पोखरेलका गीतबाट विशेष प्रभावित छन् उनी। डा. भण्डारीले अझै ती गायकका पुराना गीत गुनगुनाउन छाडेका छैनन्।
हँसिला—रसिला डाक्टर भण्डारी पछिल्लो समयको चर्चित गीत 'फूलबुट्टे सारी' पनि उत्तिकै मन पराउँछन्। यही गीत गाएर उनले गितार सेसन सुरू गरे।
धेरै भर्सनमा सार्वजनिक 'फूलबुट्टे सारी' गाइसकेपछि उनले हाँस्दै भने, 'यो चाहिँ सर्जन भर्सन।'
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सर्जन, प्राध्यापक लगायत विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिरहेका डाक्टर भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शल्यक्रिया गर्ने डाक्टरका रूपमा पनि परिचित छन्। शल्यक्रिया क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले मोबाइलमा रेकर्ड गरिएको आफ्नो स्वरको एउटा गीत सुनाउने मौका पाएका थिए।
'प्रधानमन्त्रीले अभ्यास गर्‍यो भने राम्रो गाउन सक्नु हुनेरहेछ, गाउँदै गर्नुस् भन्नुभयो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपछि उत्साह बढ्ने नै भयो।'
त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्रीकै आग्रहमा उनले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा गितार बजाउँदै गीत सुनाए। उनको यो 'गितार सो'बारे मिडियामासमेत चर्चा भयो।
त्यो कार्यक्रमपछि उनको कला व्यक्तित्वबारे धेरैले थाहा पाए। 'धेरैबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि फेरि गीत रेकर्ड गराउने आत्मविश्वास बढ्यो,' डाक्टर भण्डारीले भने।
यसअघि भने घरमा र साथीभाइमाझ मात्र खुलेर गाउने उनी अचेल सार्वजनिक रूपमा गाउन पहिला जस्तो धकाउँदैनन्। बाहिर धकाए पनि आफ्नो 'कम्फर्ट जोन'मा भने संगीतबाट कहिल्यै टाढा थिएनन्।
केही मिनेट फुर्सद मिल्यो कि गितार समातेर गुनगुनाउनु उनको बानी हो। सुत्ने कोठा होस् वा भान्सा, उनी गितार छुटाउँदैनन्। अझ भान्सा कोठा त गितार बजाउने उनको प्रिय ठाउँ हो। उनले भने, 'गीत सुन्ने प्रिय ठाउँ गाडी र गाउने बजाउने प्रिय ठाउँ भान्साकोठा हो।’
अचेल 'किचन सिंगर' बाट उनी 'कौसी सिंगर' भइसकेका छन्। अझ, फेसबुक र ट्विटरमा पनि गितार बजाउँदै गुनगुनाइरहेका उनका भिडिओ क्लिप्स भेटिन्छन्। आफ्नो युट्युब च्यानल पनि अपडेट गरिरहेका हुन्छन्।
डाक्टरी यसै पनि व्यस्त पेसा मानिन्छ। डाक्टर भण्डारीको काम त झन् शल्यक्रिया जस्तो सिधै बिरामीको जीवन-मृत्युसँग जोडिएको छ। भन्छन्, 'यस्तो कामले मानसिक रूपमा तनाव बढाइरहेको हुन्छ। आफैं संगीत सुन्ने र गाउने-बजाउने भएकाले यो मेरा लागि सबभन्दा राम्रो औषधि हो।'
धेरैका लागि आफ्नो 'प्यासन' एकातिर, पेसा एकातिर हुन्छ। सबैले पेसा र प्यासनबीच सन्तुलन मिलाउन जान्दैनन्। तर डाक्टर भण्डारी पेसागत कामबाहेक संगीत मात्र नभई खेलकुदमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। दैनिक दस किलोमिटर दौडिन्छन्। विभिन्न दौड प्रतियोगितामा सहभागी भएर पुरस्कार समेत जितेका छन्।
पेसा र प्यासन सँगै व्यवस्थापन गर्न सके सुनमा सुगन्ध थपे जस्तै हुने डाक्टर भण्डारी बताउँछन्। भने, 'संगीतले अहिले मेरो जीवनमा त्यस्तै सुगन्ध थपेको छ।'
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन ८, २०७७, १९:४९:००
बसले गलत गन्तव्यमा पुर्‍याएका पात्रहरूको कथा, हेर्नुस् युट्युबमा
लेखक-अभियन्ता संग्रौलालाई ४ लाखको 'पहिचान सम्मान'
प्रशंसकलाई कपिलको जवाफ, 'म आफैं घरमा छु, तपाईंलाई कसरी काम दिऊँ?'
दुई प्रेमीको कथा गाउँदै रचना र अभिनय